ဆိပ်​ကမ်းသာလမ်း၊ ကွန်​ဒို၊ 25'x60'၊ A/C, ပြင်​ဆင်​ပြီး။ (1850သိန်း)
​ကျောက်​တံတား၊ ဆိပ်​ကမ်းသာလမ်းမ​ပေါ်၊ ဓာတ...
Ad Number S-10045331
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊Pansodan Business Tower Condo,အရောင်း။09 444 33 77 03
Ad Number S-10040600
ကျောက်တံတား ကုန်သည်လမ်းတွင် ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုအခန်းရောင်းမည်
Ad Number S-10032278
Ad Number S-10032277
ကြောကျတံတား မဟာဗန်ဓုလပနျးခွံဈေးအနီးမှ ပွငျဆငျပွီး/အသငျ့နရေုံ ကှနျဒိုခနျး
Ad Number S-10026407
Shine Condoတှငျ အခနျးရောငျးရနျရှိသညျ
Ad Number S-10026272
CodeA36a #penthouseforsale 3000Lmmk(nego) Zizawar condo pent house..Barr street(MaHarBanDuLa Garden street) upper block..50x60.....ထပျခိုးပါလို့ sq ft 3800....2 Master room+ 1 single room..nice view..central downdown...
Ad Number S-10026155
Ad Number S-10020908
Ad Number S-10020856
ကြောကျတံတား ဘိုကလေးဈေးအနီးမှ ကှနျဒိုခနျးအရောငျး
Ad Number S-9999807